ब्रिटेनको प्रिन्स ह्यारी र मेगनको विवाह यसरी हुँदैछ – tvNEPALI
ब्रिटेनको प्रिन्स ह्यारी र मेगनको विवाह यसरी हुँदैछ
Posted on २६ बैशाख २०७५, बुधबार १२:२४ May 9, 2018
आउँदो मे १९ तारिखमा संसारभरीको नजर ब्रिटेनमा टिक्नेछ । यो त्यो दिन हो जब शाही परिवारका राजकुमार ह्यारी आफ्नी अमेरिकी प्रेमिका मेगन मर्कलसँग विवाह बन्धनमा बाँधिनेछन् ।
त्यसकारण विवाहका दिन के–के हुँदैछ भन्ने उत्सुकता तपाईं सबैमा होला ।
विवाहको दिन के हुनेछ ?
विवाह समारोह लण्डनबाट करिब ३५ किलोमिटर टाढा विन्डसर क्यासलको सेन्ट जर्ज च्यापल चर्चमा हुनेछ । विवाहका कार्यक्रम मे १९ तारिखमा ब्रिटेनको स्थानीय समयानुसार अपरान्हबाट सुरु हुनेछ ।
विवाह समारोहपश्चात् नवविवाहित जोडी विशेष प्रकारको शाही गाडीमा सवार भएर विन्डसर शहरबाट निस्कनेछ । विन्डसरमा नै विन्डसर क्यासल छ जुन महारानीको आधिकारीक आवासमध्येको एक हो ।
यहाँबाट निस्किएर शाही परिवार सेन्ट जर्ज हल पुग्नेछन् । यहाँ महारानीको तर्फबात पार्टीको आयोजना हुनेछ जसमा करिब ६ सय पाहुनाको उपस्थिती हुनेछ ।
त्यसपछि बेलुका नवविवाहित जोडीले आफ्ना नजिकका दुई सय साथीसँग फ्रोगमोर हाउसमा पार्टी दिनेछन् ।
शाही विवाहका दिन ब्रिटेनको गतीमा ब्रेक त लाग्दैन तर शाही विवाहका कारण विन्डसरमा निकै भीडभाड हुनेछ ।
त्यसदिन शनिबार परेको भएकाले मानिसहरु घुम्न निस्कनेछन् । ब्रिटेनका फुटबल प्रेमीका लागि पनि त्यो दिन विशेष छ किनभने त्यसदिन एफए कपको फाइनल म्याच हुनेछ । र त्यो म्याचले उनीहरुका लागि बढि महत्व राख्नेछ ।
त्यसकारण ब्रिटेन बन्द त हुँदैन तर हलचल पक्कै पनि देख्न पाइन्छ ।
के मेगन मर्कल राजकुमारी बन्नेछिन् ?
राजकुमारी त्यही महिलालाई भनिन्छ जसको जन्म राजघरानामा भएको छ ।
त्यसकारण मर्कल ‘हर रोयल हाइनेस प्रिन्सेस हेनरी अफ वेल्स’ भनिनेछिन् ।
महारानीले प्रिन्स ह्यारी र उनकी श्रीमतीलाई ड्युक एण्ड डचेजको दर्जा दिनसक्ने सम्भावना छ जसरी उनले प्रिन्स ह्यारीका दाइ र भाउजुलाई ड्युक र डचेज अफ क्याम्ब्रिजको दर्जा दिएकी छिन् ।
यो दर्जा पाएपछि मेगन मर्कल डचेज मेगन भनिनेछिन् ।
डायनालाई कहिले पनि आधिकारिक रुपमा प्रिन्सेस डायना भनिएन । उनलाई प्रिन्सेस अफ वेल्स भनिन्थ्यो ।
के मेगन मर्कलले शाही ताज लगाउनेछिन् ?
हुन त मर्कल शाही परिवारसँग सम्बन्धित छैनन् तर पनि उनले विवाहमा शाही ताज लगाउनेछिन् । जब लेडी डायनाको निधन भयो तब उनले बुहारीका लागि आफ्ना सबै गहना छोडेकी थिइन् ।
डचेज अफ क्याम्ब्रिजले आधिकारिक समारोहमा थुप्रै पटक उनको र महारानीको गहना लगाएको देख्न सकिन्छ ।
मर्कलले विवाहमा कस्ता गहना लगाउनेछिन् त्यो भने कसैलाई पनि थाहा छैन ।
पाहुनाको सूचीमा को–को ?
केही हस्तीले विवाहको निमन्त्रणा पाएको पुष्टि गरेका छन् । कतिले भने आफूले निमन्त्रणा पाए नपाएको बारे केही जानकारी दिएका छैनन् ।
सर एल्टन जोनको कन्सर्टको तारिख शाही विवाहको दिन परेकोले उनले आफ्ना दुई कन्सर्ट रद्द गरेका छन् ।
ब्रिटेनकी गायिका र अभिनेत्री मेल बीले उनी र पप ग्रुप स्पाइस गर्ल्सको सदस्य विवाहमा समावेश हुनेछन् ।
टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स र भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पनि मर्कलका निकै राम्रा साथी हुन् त्यसकारण उनीहरु पनि विवाहमा समावेश हुने सम्भावना छ ।
यसका साथै, मर्कलमा विशेष साथीहरु यो विवाहमा देखिनेछन् ।
प्रिन्स ह्यारीका साथीहरु पनि विवाहमा समावेश हुने बताइएको छ ।
यसका साथै, सामाजिक कार्यसँग जोडिएका करिब १२ सय साधारण मानिसहरुलाई पनि चर्चमा हुन लागेको विवाह समारोहको हिस्सा बन्नका लागि निमन्त्रणा दिइएको छ ।
विवाहमा कसलाई बोलाइने छैन ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई यो शाही समारोहबाट टाढै राखिने सम्भावना धेरैले प्रकट गरेका छन् । डोनल्ड ट्रम्पले एक पटक ठट्टा गर्दै भनेका थिए कि उनलाई प्रिन्स ह्यारीकी आमा डायनासँग डेटमा जान पाएको भए निकै मजा आउँथ्यो ।
यस्तै, अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामालाई बोलाउने अनुमान पनि थुप्रैले गरेका छन् किनभने बराक ओबामा प्रिन्स ह्यारीका साथी हुन् ।
तर, त्यस्तो केही पनि हुँदैन । किनभने यो शाही विवाहमा कुनै पनि राजनेतालाई बोलाइएको छैन । यहाँसम्म कि ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री टेरिजा मे र विपक्षी नेता जेरेमी कोर्बिनलाई पनि विवाहको निम्तो दिइएको छैन ।
मर्कलका दुई सौतेनी भाइ बहिनी छन्, यी दुई पनि विवाहमा आउने सम्भावना निकै न्यून छ ।
विवाहको पार्टीमा को को होलान् ?
पार्टीमा शाही दुलहालाई ध्यान दिनका लागि एक विशेष व्यक्ति हुन्छन् । बेस्ट म्यान भनिने ती व्यक्तिलाई दुलहा आफैंले रोज्छन् । प्रिन्स ह्यारीले आफ्ना दाइ विलियम्सलाई आफ्नो बेस्ट म्यानको रुपमा चुनेका छन् ।
विलियमले सन् २०११ मा आफ्नो विवाहमा प्रिन्स ह्यारीलाई आफ्नो बेस्ट म्यान बनाएका थिए ।
बेस्ट म्यानजस्तै दुलहीको पनि ध्यान राख्नका लागि मेड अफ अनर हुन्छिन् । तर मर्कलले भने आफुनो मेड अफ अनर चुन्न अस्विकार गरेकी छिन् ।
बस्ने केही तरिका छ ?
परिवारका नजिकका सदस्य शाही जोडीको नजिक बस्छन् । जब सन् २०११ मा प्रिन्स विलियम्सको विवाह केटसँग भएको थियो तब केटकी आमा महारानीसँग बसेकी थिइन् ।
शाही विवाहमा महिलाले किन अचम्मको ह्याट लगाउँछन् ?
शाही विवाहमा आउने महिला विभिन्न आकार र डिजाइनको ह्याट लगाउँछन् ।
तर यो ह्याट लगाउने परम्परा कहाँबाट आयो ?
वर्षौंअघि महिलाले सार्वजनिक रुपमा दिउँसो देखिनुअघि आफ्नो कपाललाई ढाक्ने गर्दथे । तर सन् १९५० को दशकमा यो परम्परा समाप्त झैं भयो । तर आज पनि विशेष आयोजना र चर्चामा जानेबेला महिला आफ्नो कपाल ढाक्ने गर्दछन् ।
आधिकारिक विवाह समारोहमा महिलाले आफ्नो शिर ढाक्नु रोयल प्रोटोकल हो ।
खानपिनको कस्तो बन्दोबस्त ?
अहिलेसम्म दिउँसो र रातीको खानाको मेन्यू तयार गरिएको छैन । तर श्याम्पेनको पूरा बन्दोबस्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
श्याम्पेनको बोतल पनि विशेष स्थानबाट आउनेछन् ।
डीजे वा ब्यान्ड ?
शाही समारोहमा ब्यान्डको प्रस्तुतीको सम्भावना छ ।
स्पाइस गर्ल्स पप ब्यान्डलाई समारोहमा आमन्त्रित गरेको बताइएको छ । यो ब्यान्डको हिट गीत टू बिकम वानमा शाही जोडीले नाच्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।
अथवा सर एल्टन जोन आएर ‘क्यान यू फिल द लभ टुनाइट’ गाउन सक्नेछन् ।
Posted in विदेश Tagged प्रिन्स ह्यारी
जाजरकोटका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा
नेपालको आर्थिक विकासको अभियानमा चिनियाँ लागनीकर्ताहरुलाई हार्दिक स्वागत छ : प्रचण्ड